ပိုမိုတည်တံ့သောခရစ္စမတ်မီနူးအတွက် အကြံပြုချက်များ | Bezzia
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များက ကျွန်ုပ်တို့သည် Bezzia တွင် အောက်ပါမေးခွန်းကို မိမိကိုယ်ကို မေးခဲ့သည်- ခရစ္စမတ်ကို ရေရှည်တည်တံ့သောနည်းဖြင့် ပျော်မွေ့ရန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ မေးခွန်းကို ဖြေဆိုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နှစ်၏ဤအချိန်ကိုကျင်းပရန်အခြားနည်းလမ်း မှော်ဆန်ပြီး ပျော်စရာ၊ ဒါမှမဟုတ် ပိုတောင်ကောင်းပါသေးတယ်။ ယနေ့တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖန်တီးမှုပြုလုပ်ရန် အကြံပြုချက်များကို အာရုံစိုက်ကာ ထိုအယူအဆကို ပြန်သွားခဲ့သည်။ ပိုမိုတည်တံ့သောခရစ္စမတ်မီနူး။
ခရစ္စမတ်မီနူးအကြောင်း စဉ်းစားဖူးသူ အများအပြား ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူများ၊ ကပ်ရောဂါမှ ဆင်းသက်လာသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် သင်သည် နောက်ဆုံးမိနစ်တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် စောင့်ဆိုင်းနေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယဉ်ကျေးမှုတွင် အစားအစာသည် အလွန်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အိတ်ကပ်များအပေါ် သက်ရောက်မှုအပြင် ကျွန်ုပ်တို့ ချက်ပြုတ်သည့်အရာသည်လည်း ထုတ်ပေးသည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သိသာထင်ရှားသောပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု။
ရေရှည်တည်တံ့မှုနှင့် ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ Bezzia တွင် ကျွန်ုပ်တို့ အပတ်စဉ်ရေးနေသည့် ဆောင်းပါးများကို သင် ဂရုပြုပါက၊ ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော ခရစ္စမတ်မီနူးတစ်ခုဖန်တီးရန် ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေထားသော အကြံပြုချက်အချို့သည် အတွင်းပိုင်းဖြစ်မည်မှာ သေချာပါသည်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ မနာဘူး။ အဲဒါတွေကို ပြန်ဖတ်ပြီး သတိထားပါ။
4 အမှိုက်ကို ရှောင်ပါ။
ရာသီအလိုက် အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စားသုံးခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို အတင်းအကြပ် စိုက်ပျိုးခြင်းသာမကဘဲ ရာသီဥတု ဖောက်ပြန်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ မလွှဲမရှောင်သာ စျေးကွက်များသို့ ရက်သတ္တပတ်များစွာ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သွားလာခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်ပါသည်။ ရာသီအလိုက် အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စားသုံးရန် အကြောင်းရင်းငါးခုရှိသည်ဟု အသေးစိတ်ပြောနိုင်သည်။
၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ အာဟာရများကို ထိန်းထားကြသည်။. မှန်ကန်သော နေရာတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ၎င်းတို့၏ သဘာဝ သံသရာကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အာဟာရ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းသိမ်း ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သူ့အရသာက ပိုပြင်းထန်တယ်။အစားအစာသည် စိမ်းနေချိန်တွင် သို့မဟုတ် အတုအယောင်မှည့်သောအခါတွင်မဟုတ်ဘဲ ၎င်း၏ ရင့်မှည့်ချိန်၏ အကောင်းဆုံးအချိန်၌ စုဆောင်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တစ်ခုတည်းသော စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် စက်မှုလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အလေ့အကျင့်များနှင့် ယှဉ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် တောင်သူလယ်သမားငယ်များ၏ အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးများကို လယ်ယာဂေဟဗေဒထိန်းသိမ်းမှုသို့ ဦးတည်စေသည့် အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးများကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးပါသည်။
ကာဗွန်ခြေရာကို လျှော့ချပါ။ ရာသီအလိုက်နှင့် ဒေသထွက်ကုန်များကို အအေးခန်းခန်းများတွင် သိမ်းဆည်းရန် မလိုအပ်သလို တိုက်ကြီးတစ်ခုမှ တစ်နေရာသို့ တင်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုတွင် CO₂ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု အလွန်နည်းပါသည်။
ဖြုန်းတီးမှုနည်းတယ်။ ဒေသတွင်း ရာသီအလိုက် ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူခြင်းသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် သိုလှောင်မှု နှစ်ခုစလုံးကို လုံးဝနီးပါး ဖယ်ရှားလုနီးပါးဖြစ်သောကြောင့် ထုပ်ပိုးမှုအသုံးပြုမှုကို သက်သာစေပါသည်။
အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက ဘာတွေလဲ။ ဒီဇင်ဘာလလယ်တွင် ရာသီချိန်ဖြစ်သည်။? အသီးအနှံများထဲတွင် သံပုရာသီး၊ လိမ္မော် သို့မဟုတ် စပျစ်သီးကဲ့သို့သော လိမ္မော်သီးများသည် ကီဝီ၊ ထောပတ်သီးနှင့် သီးပင်သီးတို့ကို ပေါင်းထည့်ထားသည့်အတွက် ထင်ရှားသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် ဘရပ်ဆဲလ်ပင်ပေါက်များ၊ chard၊ တရုတ်နံနံ၊ ဘရိုကိုလီ၊ ဆူးပင်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ရွှေဖရုံသီး၊ endive၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ မုန်လာဥနီ၊ ကြက်သွန်မြိတ်နှင့် မုန်လာဥနီတို့ ပါဝင်သည်။
ခရစ္စမတ်မီနူးများရှိ ပုံမှန်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် ပန်းကန်ပြားသို့မရောက်မီ ကီလိုမီတာ 5.000 ကျော် ခရီးနှင်ကြောင်း သင်သိပါသလား။ ၎င်းကိုရှောင်ရှားရန်၊ ဒေသတွင်းပါဝင်ပစ္စည်းများမှမီနူးများဖန်တီးကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် သင့်အိတ်ကပ်အတွက် ကောင်းမွန်စေရုံသာမက၊ ၎င်းသည် ဒေသတွင်းစီးပွားရေးနှင့် ကမ္ဘာဂြိုဟ်အပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများလည်း ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ CO2 ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချပါ။ ၎င်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှရရှိသောအခြားပြဿနာများ။
နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေက အချက်အလက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ လက်ရှိအစားအသောက်စနစ် ရေရှည်မတည်တံ့နိုင်ပါ။ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏ သုံးပုံတစ်ပုံကို ထုတ်ပေးသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ကမ္ဘာမြေဧရိယာ၏ 34% ကို လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရည်စူးထားပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် မွေးမြူရေးတိရစ္ဆာန်များကို အစာကျွေးရန်အတွက်သာ လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် အမဲသားစားသုံးမှုကို ကန့်သတ်ခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ပြည်တွင်းနှင့် ရာသီအလိုက် ထွက်ကုန်များပေါ်တွင် လောင်းကြေးထပ်ခြင်းကဲ့သို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။
ဤခရစ်စမတ်တွင် သက်သတ်လွတ် သို့မဟုတ် vegan ဟင်းလျာများ ချက်ပြုတ်ရန် စိတ်ကူးများ ရှာဖွေနေပါသလား။ @lagloriavegana ခရစ္စမတ်တိုင်းသည် စိတ်ကူးကောင်းများရှိသော e-book တစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ ထမင်းချက်စာအုပ်တွေမှာ နောက်ထပ်အများကြီးတွေ့နိုင်တယ်၊ Yotam Ottolenghi က အဲဒါတွေကို နေ့စဥ်နဲ့ ပါတီပွဲတွေအတွက်ရော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရပါ ငါကြိုက်တယ်။
မှန်ကန်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းအပြင်၊ မှန်ကန်သော ပမာဏဖြင့် ဝယ်ယူပါ။ ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သော ခရစ္စမတ်မီနူးကို ဖန်တီးရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ အပတ်စဉ် မီနူးများကို သင်စီမံသကဲ့သို့ ခရစ္စမတ်မီနူးများကို စီမံပါ။ ၎င်းတို့ကို ကြိုတင်စဉ်းစားပါ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို တွက်ချက်ပြီး သင့်စျေးဝယ်စာရင်းကို ပြုလုပ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့်သာ အစားအစာကို ဖြုန်းတီးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဤရက်စွဲများတွင် အဖြစ်များပါသည်။
ယခုနှစ်တွင် ပိုမိုတည်တံ့သော ခရစ္စမတ်မီနူးကို ဖန်တီးရန် သင်ကြိုးစားမည်လား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » ပိုမိုတည်တံ့သော ခရစ္စမတ်မီနူးအတွက် အကြံပြုချက်များ
အရေးအကြောင်းအများဆုံးဖြစ်စေတဲ့ အလေ့အကျင့်တွေကို သင်သိပါသလား။